यौन स्वास्थ्य Archives - नागरिक रैबार
दाम्पत्य सुख र यौनको समीकरण
पछिल्ला केही घटनाक्रमलाई नियाल्ने हो भने धेरै दम्पतीबीचको कलह सतहमा छताछुल्ल भएका छन् । श्रीमान–श्रीमतीले एअर्कालाई धोका दिने, सम्बन्ध विच्छेद गर्ने, विवाहेत्तर सम्बन्धमा रहने जस्ता क्रियाकलप बढ्दो छ । बालबच्चालाई बिल्लीबाठ पारेर उनीहरुको दाम्पत्य जीवन कलहको आँधीबेहेरीमा परेको छ । यसमा अहिले सामाजिक सञ्जाल, युट्युब जस्ता माध्यामहरुले आगोमा घिउ थप्ने काम गरिरहेका छन् । मुलुकमा […]
सन्तानको योजना नबनाएको अवस्थामा वा सन्तानको रहर पुगिसकेपछिको अवस्थामा पनि गर्भ रहने सम्भावना हुन्छ । हुन त सुरक्षित यौन सम्पर्कका अनेक विकल्प छन् । यद्यपि कहिले काहीँ असावधानीवस् गर्भ रहन्छ । यस्तो अवस्थामा के गर्ने ? विकल्प हो, आकस्मिक गर्भ निरोधक चक्की । यौन सम्पर्क गरेको निश्चित अवधिसम्म यसको सेवन गरेपछि गर्भ रहने भय धेरै […]
नागरिक रैबार/बाजुरा २२ मंसिर। जिल्लास्थित क्रियाशिल संचारकर्मीहरुसंग सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको छ । आईपास नेपाल पिसविन बाजुराको आयोजनामा उक्त कार्यक्रम सदरमुकाम मार्तडीमा गरिएको हो । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बाजुरामा सुरक्षित गर्भपतनको सेवा र संचारकर्मीको सुरक्षित गर्भपतन सम्वन्धि समाचार सम्प्रेषण गर्ने भुमिका बारे छलफल गरिएको छ । कार्यक्रमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराका तथ्याकं प्रमुख रुगम […]
ईरान : जहाँ छोरीसँग बाबुले विवाह गर्न सक्छन्
एजेन्सी । विश्वमा यस्ता कैयौ देशहरु छन, जो आफनो अनौठो–अनौठो कानुनलाई लिएर सधै चर्चामा आइरहन्छन् । यस्तै देशहरु मध्येको देश हो ईरान, जहाँ यस्तै–यस्तै अनौठा –अनौठा कानुन छ, जसको बारेमा जानेर मानिसहरु अचम्ममा पर्दछन् । यहाँ मानिसहरुलाई कैयौ प्रकारका प्रतिबन्धहरु लगाइएको छ, जसको बारेमा सायदै पनि तपाई जान्नुहुन्छ होला । – यो देशमा महिलाहरु स्टेडियममा […]
काठमाडौं । नवरात्रि एक संस्कृत शब्द हो, जसको अर्थ हुन्छ नौ रातहरूको समूह । हिन्दू धर्ममा मनाइने चाडपर्वहरूमध्ये सबैभन्दा पवित्र मानिने नवरात्रि वर्षमा चार पटक मनाउने प्रचलन थियो । तर अहिले केवल दुई पटकमात्रै सर्वसाधारणले मनाउने चलन छ । हिन्दू धर्मको मान्यता अनुसार यी दिनमा हरेक घरघरमा देवी दुर्गाको नाममा जप्ने गरिन्छ । अधिकांश महिलाले […]
सम्बन्धमा यौन सम्बन्धको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ तर कतिपय अवस्थामा महिलाहरू आफ्नो यौन जीवनमा त्यति सन्तुष्ट भएका पाइँदैन । महिलाहरू यस विषयमा खुलेर कुराकानी गर्न चाहँदैनन् तर उनीहरू भित्रैदेखि निराश भइरहेका हुन्छन् । महिलाहरू आफ्नो यौन जीवनमा असन्तुष्ट हुनुका केही कारणहरू छन् । १. महिलाहरू सम्बन्धमा तपाईंको प्रेम, स्नेह र सम्मानको महसुस गर्दैनन् भने उनीहरूको लगाव […]
धनगढी ३२ जेठ । कैलालीको एक क्वारेन्टिनमा बसेकी एक महिलाले आफू सामूहिक बलात्कारमा परेको बताएकी छन् । लम्कीचुहा नगरपालिका वडा नम्वर १ स्थित शहीद स्मृति माविको क्वारेन्टिनमा रहेकी ३१ वर्षीया महिलाले शनिबार मध्यरातमा समूहिक बलात्कार भएको भन्दै न्याय मागेकी हुन् । तर घटना लुकाउन खोजिएको भन्दै स्थानीयबासीले आइतबार वडा नम्बर १ को कार्यालयसमेत तोडफोड गरेका […]
काठमाडौं ३० वैशाख। नेपालमा एकै दिन ५७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । थपिएका संक्रमितमध्ये पर्सामा मात्र ३९ जना रहेका छन् । त्यस्तै कपिलवस्तुका ८, रुपन्देहीका ९ र बाराका १ जना छन् । थपिएका संक्रमित सबै पुरुष रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले जानकारी दिए । योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या […]
यौन : प्रेमको केन्द्रीय तत्व
जैविक नियम हो, विपरीत लिङ्गी एकआपससँग आकर्षित हुनै पर्छ । विपरीत लिङ्गीप्रति आकर्षण नहुने त बिरामी मानिन्छन् । अझ किशोरावस्थामा शरीरका इन्द्रियहरू निकै तेज गतिमा विपरीत लिङ्गीप्रति आकर्षित हुने गर्छन् । किनकि उनीहरूको स‌वेगनाकाे वेग नै तेज हुन्छन् । किशोरावस्थामा शरीरका अङ्ग र हर्माेन परिपक्व हुँदै जाने भएकाले पनि विपरीत लिङ्गीप्रतिको चाह बढ्नु स्वाभाविक नै हो । विपरीत […]
काठमाडौं–कुनै समय यौन रोगीलाई नेपाली समाजले निकै घृणाको दृष्टिले हेथ्र्यो । अहिले यौन रोग र रोगीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा केही सुधार आएको भएपनि समस्याहरु कायमै छन् । जसका कारण समयमा यौन रोगको उपचार भएको पाइँदैन । बिर्सन नहुने कुरा के हो भने–यौन रोगको समयमै उपचार नगरे थप समस्या निम्तन सक्छ । त्यसैले यौन रोगको लक्षण देखिना […]